Qodobada ay Ka Taageeri-doonaan RW Rooble Guddigii Uu Xalay Magacaabay Oo la Shaaciyay(Sawiro) – Awdalmedia
Guddiga sare ee Farsamada ee doorashooyinka dalka ee uu xalay magacaabay Ra’iiul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen ayaa Maanta kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka.
Guddiga ayaa kulankooda waxaa ay diirada ku saaren Arrimaha farsamo ee mudnaanta u leh Ra’iisul Wasaare Rooble, isla markaana ay ka taageerayaan, si uu habsami uga fuliyo howlaha doorashooyinka ee uu xilsaaran yahay.
Guddigaan ayaa Ra’iiusl Wasaaraha ka taageeri doona Arrimo dhowr ah oo ay kamid yihiin in si habsami ah loo fuliyo qodobadii Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada ay heshiiska uga gaareen doorashada dalka ka dhaceysa.
Sidoo kale Guddigan oo ka kooban 7-xubnood ayaa Rooble kala shaqeyn doona in la hagaajiyo habsami u xiriirka dhammaan hay’addaha ku shaqada leh Arrimaha doorashooyinka iyo in taageero farsamo uu siiyo Guddiyada doorashooyinka.
Waxaa kaloo ay Guddiga sare ee Farsamada u qaabilsan Rooble doorashada ay xoojin doonaan xiriirka ka dhexeeya Xafiiska Ra’iisul Wasaaaraha, Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Beesha Caalamka.
Doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxaa maamulaya hirgalintooda Guddiyada madaxa bannaan ee heer Federal FIET iyo Heer dowlad Goboleed SIET iyo Guddiga Xallinta Khilaafaadka”.
Guddigaan Ra’isul Wasaaruhu uu magacaabay waxaa ay shaqadoodu ku kooban tahay in ay farsamo ahaan gacansiiyaan Guddiyadaas kor ku xusan, si howlaha doorashada ugu qabtaan si daahfuran oo madax bannaan.